Apple dia hanolotra Apple Music 6 volana maimaim-poana amin'ny maodely Fiat sy Volkswagen | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manohy ny adiny amin'i Spotify, ilay mpisava lalana amin'ny fandoavana vola isam-bolana mba hihainoana katalaogin'ny mozika feno mivantana. Ny hetsika farany nataon'izy ireo hatramin'ny Cupertino dia misy ifandraisany amin'ny Apple CarPlay, Apple Music ary marika samihafa amin'ny sehatry ny fiara: Fiat sy Volkswagen.
Raha ny fahitana azy, ireo mpampiasa amerikana avaratra izay te-hividy fiara vaovao ary an'ny iray amin'ireo goavana roa amin'ny sehatry ny fiara dia hanana tombony raha toa ka tia mozika izy ireo. Fantatrao tsara fa matetika dia matetika ny manana rafitra infotainment tanteraka ao anaty fiara izay mifandray amin'ny terminal misy antsika ary afaka mankafy serivisy isan-karazany amin'ny efijery mikasika eo amin'ny solaitrabe isika. Iray amin'ireo rafitra malaza indrindra ny Apple CarPlay ary miha mahazo vahana hatrany ny fahitana azy miasa ao anaty fiara. Raha manapa-kevitra ny hisafidy maodely Fiat na Volkswagen miaraka amin'ity rafitra ity ianao, Hanome anao Apple Music 6 volana i Apple.
Mitandrema, satria ity fampiroboroboana ity dia - mandritra ny fotoana fohy - dia manan-kery any Etazonia rehefa miresaka momba ny Fiat / Chrysler isika; Tsy nisy nahenoana na inona na inona tao amin'ny tsena sisa. Ary koa, amin'ity tranga ity Miresaka izay hitranga amin'ny vondrona iray manontolo izahay; ie: Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep.
Raha, Volkswagen dia hampandeha ity fifanarahana ity any Eropa hatramin'ny 1 Mey. Tsy voafaritra ihany koa raha hitarina amin'ireo fiaramanidina manontolo ireo fepetra ireo sa ho voatokana ho an'ny maodely sasany fotsiny. Mazava ho azy, tsy hitarina amin'ny vondrona Volkswagen (Audi, Porsche, SEAT, Skoda) izy io, fa hahomby amin'ny marika fotsiny.
Etsy ankilany, raha mpampiasa ianao izay efa mankafy ny Apple Music amin'ny fitaovanao Cupertino, inona no hataon'ireo marika isan-karazany dia ny mandoa anao 3 volana amin'ny serivisy mozika ao mivantana. Miaraka amin'ity hetsika ity, ny ezahin'ny Apple dia aorian'ireo enim-bolana nisoratana anarana maimaim-poana ireo mpampiasa mihoatra ny iray mijanona eo amin'ny lampihazo ary arak'izany mahazo tombony amin'ny Spotify, izay manana, hoy ny WSJ, avy amin'ireo mpampiasa 71 tapitrisa Premium raha ampitahaina amin'ny 36 tapitrisa izay ananan'ny Apple Music.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia hanolotra Apple Music 6 volana maimaim-poana amin'ny maodely Fiat sy Volkswagen sasany